मासु नखाए के हुन्छ, फाइदा कि बेफाइदा ? – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Intresting/मासु नखाए के हुन्छ, फाइदा कि बेफाइदा ?
मासु नखाए के हुन्छ, फाइदा कि बेफाइदा ?
मासु नखाए के हुन्छ ? यसको केही सकारात्मक जवाफ आउन सक्छ, ‘एउटा भान्साको व्यायभार घट्छ ।’ किनभने तुलनात्मक रुपमा मासु अरू तरकारीभन्दा महँगो हुन्छ । त्यसैगरी, मासु पकाउनका लागि आवश्यक समय र मेहनत बढी हुन्छ, मरमसला बढी हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, मासु सेवन अहिले कतिपय दीर्घ रोगको कारण बन्ने गरेको छ। मासुले पाचनतन्त्रलाई बोझिलो बनाउनेदेखि शरीरमा बिकार पैदा गर्ने भय रहन्छ । त्यसैले, स्वस्थ जीवनका लागि मासु उपयुक्त मानिँदैन ।
तेस्रोमा यसले कम्तीमा पशुपन्छीमाथि हुने हाम्रो हिंस्रक व्यवहार केही हदसम्म भएपनि रोक्छ । काट्ने, मार्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्छ ।
चौथोमा पर्यावरणमा सहयोग पुग्छ। साथसाथै यसको नकारात्मक जवाफ पनि छ । एक, मासु सेवन नगर्दा हाम्रो मेनुबाट एउटा मुख्य खान्की कटौती हुन्छ । दुई, चाडपर्व, उत्सव वा रमाइलोमा मासुजन्य परिकारको स्वाद मिल्दैन । तीन, शरीरमा आवश्यक कतिपय पोषक तत्वको अभाव हुन सक्छ ।
सन्तुलित आहारमा मासु पनि सामेल गरिन्छ । तर, अर्को तथ्य के पनि भने, मासुजन्य परिकारबाट जुन पौष्टिक तत्व प्राप्त हुन्छ, त्यो अन्य खाद्य पदार्थबाट पाउन सकिन्छ । त्यसैले मासु निर्विकल्प खाद्य स्रोत भने होइन ।
मासुको बदला सागपात सेवन गर्न सकिन्छ । फलफूल, गेडागुडी सेवन गर्न सकिन्छ । यस्ता खानेकुराले स्वास्थ्य राम्रो हुने मात्र होइन, अनावश्यक खर्च पनि कटौती हुन्छ । यसले पशुपन्छीप्रति हामीलाई निर्दयी बन्नबाट रोक्छ। पर्यावरणलाई सन्तुलित राख्न सहयोग गर्छ ।
मासुको लागि ठूलाठूला फार्ममा जनावरलाई अत्यन्तै क्रुर ढंगले पालिन्छ । मासु खान योग्य भएपछि उत्तिकै क्रुरतापूर्वक वध गरिन्छ । यी जनावरहरूले कहिल्यै पनि आफ्नो परिवार हुर्काउन, प्राकृतिक बासस्थानमा बस्न, गुँड बनाउन र अन्य प्राकृतिक कुराहरू गर्न पाउँदैनन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टका अनुसार मासु खानु विश्वको प्रमुख वातावरण समस्यामध्ये एक हो । रिपोर्टले मासु खानाले विश्वभर रहेका कार, बस, ट्रक, जहाजले उत्पादन गर्नेभन्दा ४० प्रतिशतभन्दा धेरै ग्रिनहाउस ग्यास उत्पादन गर्ने बताएको छ ।
स्वस्थ जीवनको लागि मासु त्याग्नु राम्रो विकल्प मानिन्छ । अहिले विभिन्न किसिमका रोगले गाँज्दै लगेपछि मानिसहरूले मासु खान छाडिरहेका छन् । मांसाहारी मानिसकोभन्दा शाकाहारी मानिसको औसत आयु १० वर्षभन्दा धेरै हुने पाइएको छ । स्वस्थ शाकाहारी खानाले जीवनभरको लागि स्वस्थरहन मद्दत गर्छ र मुख्य रोगहरू जस्तैः मुटुको रोग, क्यान्सर र हृदयघातबाट बचाउँछ ।
मासु खाने मानिसहरूलाई मुटुको रोग लाग्ने सम्भावना शाकाहारीलाई भन्दा ५० प्रतिशतले बढी हुन्छ । चिकित्सकहरूका अनुसार स्वस्थ शाकाहारी खानाले मुटु रोगलाग्ने जोखिम समेत घटाउँछ ।
घरमा आम्दानी भन्दा बढि खर्च हुन्छ ? बुधबार यसो गर्नुहोस्…..
चीनमा जिउँदै गाडिएकी महिलाको तीन दिनपछि जीवितै उद्धार !